Ny fihenan-tsasatra avo lenta amin'ny alàlan'ny jaw teeth amin'ny karbona
Home / Applications / Induction Hardening / Nify mafy ny valanoranon'ny vy karbonika
Sokajy: Induction Hardening Tags: hamafin'ny, vy karbonina mafy, mihamafy nify, ny fihanaky ny valanoka nify, haavo, fihenjanana ambony frezy, ny nify mahery setra, fihenan-tsasatra avo lenta, induction hardening, mihidy nify mafy volo, mihamafy ny nify
Ny fihenan-tsasatra avo lenta amin'ny fampidiran-tsolika matevina
Mahomby ny fihanaky ny nify valan-jaza amin'ny alalàn'ny induction.
DW-UHF-6KW-milina fanamafisan-tànana ho an'ny induction
Ny nify vy vita amin'ny vy dia nomen'ny mpanjifa
Hery: 4 kW
Silo: eo ho eo ny 1526 ° F (830 ° C)
Fotoana: 10-15 sec
Nisy coil fitsapana namboarina ho an'ny fampiharana.
Ny santionany dia raikitra teo amin'ny toeran'ny coil
Ny fandroana ny induction dia ampiharina amin'ny nify.
Ny hafanana amin'ny santionany dia arahi-maso mandritra ny hafanana.
Nampiharina ny hafanana mandra-pahatratrarana ny mari-pana.
Nahavita nahatratra ny fara heriny ny rafitra.
Ny nify dia mafana ny 830 ° C ao anatin'ny 12 sec.
930 ° C no tratra tamin'ny 20 seg.
Tontona ao anatin'ny 770 seg sec ny curie point (manodidina ny 5 ° C).
Ny fanamafisana rafitra -DW-UHF-6KW-I dia mety amin'ny fizotran-javatra.
Ny coil Classic dia mety koa amin'ny fampiharana ity.
Ny fiadidiana ny fizotrany dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny fifindran'ny HS amin'ny coil na ny valanoka amin'ny zoro.
Ny fisafidianana mety tsara dia tsy maintsy misafidy. Fahaizana mangatsiaka - farafahakeliny 4kW. Ny rafitra mandeha amin'ny rano-rano dia azo ampiasaina, fa miankina amin'ny mari-pana ny fiasan'ny ambient.